HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaQaab-dhismeyaasha iyo Injineerada waxay yiraahdaan Waan kasoo horjeednaa mashruuca Teleferic Sapanca
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER 0
Wakiilo ka socda qolalka injineeriyada iyo naqshadaha dhismaha ee Sakarya waxay la kulmeen wakiilka shirkadda fulisa mashruuca jid-gooyada ee Sapanca
Mashruuca jid-gooyada ee Kırkpınar Neighborhood, oo laga soo kiraystay degmada Sapanca muddadii maamulkii hore, ayaa in muddo ah ku jiray ajandaha dadweynaha. Bursa Teleferik AŞ, oo ku guuleysatay hindisada, ayaa la kulantay falcelinta dadka gobolka iyo ururrada aan dowliga ahayn ka hor intaysan bilaabin shaqada.
Salim Aydın, Sakarya Wakiilka Gobolka ee Rugta injineerinka injineerrada ee TMMOB (Ururka Guryaha ee Injineerayaasha Turkiga iyo Architects), Hüsnü Gürpınar, Madaxweynaha Sakarya Laanta Rugta injineerrada madaniga ah, Sami Kafadar, Wakiilka Gobolka ee Sakarya Wakiilka Rugta Architects ee wakiilkii shirkadda Demgay Mandacı ah; Wuxuu kulan la yeeshay Burhan Özgümüş oo ka socda Bursa Teleferik A.Ş.
Kadib codsigii shirkadda, Burhan Özgümüş, sarkaalka shirkadda, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kulanka lagu qabtay wakiilka gobolka ee Rugta injineerinka injineerada.
Özgümüş wuxuu sharraxay faahfaahinta hannaanka wax soo iibsiga illaa iyo hadda, wuxuuna sheegay in 80% lacagihii lasiiyay Dawladda Sapanca la sameeyay.
Adigoon arkin meesha
Özgümüş wuxuu cadeeyay inay saxeexeen warbixinta gudbinta iyagoon arkin meesha, laakiin aysan bilaabi karin howsha; Sababta taa loo sameeyay ayaa ah in Duqa cusub la filayo inuu qabto jagada degmada, ayuu yidhi.
WEYDII LAGU SAMEEYO
Wakiilka Rugta injineerinka farsamada ee gobolka Salim, Kartepe iyo Sapanca Kırkpınar xaraashka ayaa weydiiyay tirada shirkadaha ka qeyb qaadanaya howshan.
Saraakiisha shirkadda, su’aashan; waqtigaas, 2 waa muddo bilo ah iyo faylka jilicsan, tirada shirkadaha 4, tirada shirkadaha galay gundhigga qandaraaska 1, oo iyagu qudhoodu ay ku jawaabeen iyagoo leh.
WAXAAN KU SAMEEYAAN MADAXWANAANADA
Rugta injineerinka farsamada mashiinka kulanka ee gobolka, macluumaadka soo socda ee ku saabsan sii wadista kulanka waxaa lasiiyay:
Teknik Waxaa farsamo ahaan loo sheegay in doorashada goobta mashruucan ay khalad ahayd. Haddii la codsado, waxaa la caddeeyey inay gacan buuxda ka siin doonaan daraasadaha mashruuca cusub iyagoo go'aaminaya goob kale oo anfici doonta dadka iyo magaalada iyadoon waxyeello u geysan isu-dheellitirka deegaanka. Ururka midowga dhismayaasha Turkiga iyo injineeriyada Sida Sakarya ka kooban, waxay cadeeyeen inay kasoo horjeedaan xaalada mashruucan ee hada jirta, iyo in dadka reer Kırkpınar ay sameyn doonaan waxkastoo ay qaadayaan si looga hor tago mashruucan inuu dhaco isla markaana aysan ka tanaasuli doonin arintaas. qandaraaslaha ayaa la ogeysiiyay go'aankooda waxayna uga mahadceliyeen kulanka. ”Sakarya Yenihaber)
Dhismayaasha iyo Machadyada Kooxda ayaa ka warramay astaanta Kadikoy-Kartal! 19 / 08 / 2012 Inkasta oo aynu ku sameeyey nidaamka tareenka metro dunida ee labaad ugu da'da weyn ee dalka nasiib daro waxaa la dayacay muddo dheer ilaa hal sano xnumx'l xnumx'l ee sannadka soo. In tareenka ilaa nidaamka metropolises horumarsan dunida ee Istanbul weli in ay ku filan iyo wixii u dhiman isdhexgalka gaadiidka dadweynaha, Magaalooyinka, magaalo ka mid ah had iyo jeer ka maqan ee Istanbul ayaa la dareemay .. sano 1940 hore, gaadiidka dadweynaha, dardar gaar ahaan helay horumarinta dhulka hoostiisa iyo mashruuca light rail, Horumarinta nidaamka tareenada ayaa la tixgeliyaa, laakiin markaan ka fekereyno xajinta koritaanka, waxaa loo arkaa in waxbarashadu aysan ku filneyn. Nidaamka tareenka iyo metro waa mid aan lagama maarmaan u ah nidaamka gaadiidka dhaqaale, nabadgelyo, degdeg ah oo raaxo leh
Maanta taariikhda: 11 Febraayo 1888 Dhismaha Saldhigga Sirkeci wuxuu bilowday. Architect Prussian Ogust Yasmund ... 11 / 02 / 2015 Maanta, iyada oo 11 February Febraayo 1878, waxaa la aqbalay in shirkadaha tareenada ee Rumeli ay noqdaan Austrian. Magaca shirkadu wuxuu noqday Orient Railways Company Company. 11 Febraayo 1888 Dhismaha dhismaha Sirkeci Gar ayaa bilaabmay. Mashruucan, oo uu naqshadeeyey dhismaha Prussian Ogust Yasmund, ayaa lagu soo bandhigay 3 November 1890.
Waxa uu doonayay in uu adkeeyo sano 500 ku salaysan Masjidka 110 Mimar Sinan ahaa ku qanacsaneyn sanadka Marmaray 06 / 06 / 2013 Ra'iisul wasaaraha Tayyip Erdogan ayaa ka codsaday Ahmet Eren, Guddoomiyaha Ururka Shaqaalaha Cement Cooperative iyo Guddoomiyaha Guddiga Agaasimaha Guddiga Eren Holding ee kulankan ee Bitlis, 500 ka hor. innagu badanaa sannado? - 110 wuxuu leeyahay taariikh sanadle ah. - Xitaa wakhtigaas, dhismayaasha 2-da muddo dheer ayaa la dhigay. Maxaad u saari mayso miinooyinka yaryar ee ka baxsan 500-500? Ahmet Eren, wada hadal dhex mara Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Cement Turkey-saareyaasha Association (TCMA) Madaxweynaha Automotive iyo Oyak Group Cement kulanka, ka TÇMB Madaxweyne ku xigeenka ...
Sawiraan rinjiyeynta sawirada Mimar Sinan Bridge 30 / 04 / 2014 Sawir-qaadista saxda ah ee Mimar Sinan Bridge: Mid ka mid ah buundooyinka waawayn ee lugta leh ee ay dhiseen Dawladda Hoose ee Kobanheegan ee ku taal D-100, Mimar Sinan Bridge oo ku taal Masjidka Cusub ee New Juma ayaa la rinjiyeeyay. Nidaamka dheehidda waxaa la rajeynayaa in uu dhammaado qiyaasta 6. CLEANLENİP, PAINTING Mid ka mid ah buundooyinka jidka weyn ee dhisay magaaladda Metropolitan ee kuyaal D-100, mid ka mid ah gawaarida Sinan Bridge ee geedka Sinan Bridge 3 ayaa la qabtay hal bil ka hor. Shirkadda ayaa bilawday geedi socodka ranjiga oo bilawga bilaha xagaaga. Rinjiyeynta leh wiishooyin gaar ah iyo shaqaalaha 4 waxaa loogu talagalay in lagu dhameeyo bilaha 7. Saraakiisha shirkadda ayaa sheegay in haddii cimiladu wanaagsanaato, muddadani waxay jiri doontaa
Haddii kororka dhaqanka Mimar Sinan Bridge uu socon karo 03 / 06 / 2014 Haddii kor u kacayaasha kacdoonka ee Mimar Sinan Bridge sidoo kale ay socon karaan: Wadada D-100 Waxaa jira dad badan oo ka mid ah taraafikada dadku ku leeyihiin buundooyinka dadka lugta ku socda ee Ismaamulka. Si kastaba ha noqotee, kacdoonnada Mimar Sinan Bridge, gaar ahaan dhinaca hore ee masjidka Yenicuma, ayaa had iyo jeer naafo ah. Marka aysan jaranjarada socon karin, gaar ahaan dadka waayeelka ah, ka gudbidda buundada lugta ayaa sidoo kale aad u daacad ah. Yooleeyayaasha waxay u baahan yihiin in la hubiyo marar badan haddii ay shaqeeyaan, iyo haddii ay dhacdo in ay guul daraystaan, waxay u baahan yihiin in si degdeg ah wax looga qabto.
Dhismayaasha iyo Machadyada Kooxda ayaa ka warramay astaanta Kadikoy-Kartal!
Maanta taariikhda: 11 Febraayo 1888 Dhismaha Saldhigga Sirkeci wuxuu bilowday. Architect Prussian Ogust Yasmund ...
Waxa uu doonayay in uu adkeeyo sano 500 ku salaysan Masjidka 110 Mimar Sinan ahaa ku qanacsaneyn sanadka Marmaray
Haddii kororka dhaqanka Mimar Sinan Bridge uu socon karo